Ku xadgudubka galmada - kuwa gardarrada, aqoonsada calaamadaha iyo ficil dheeraad ah
Hanjabaadda iyo abaal-marinta - kala hadal habka dembiilaha ee carruurta
Sidee looga ilaaliyaa caruurta galmada weerarka internetka?
Nabadgelyada la aaminsan yahay ee internetka
Halkee ayey ka dhacdaa xadgudubka galmada ee carruurta iyo dhallinyarada?
Calaamad muujinaysa xadgudub galmo
Maxaa la sameeyaa haddii ilmahaagu u-galmoodey galmo?
Waxa la sameeyo haddii uu jiro shaki
Dhamaan waalidiinta waxay rabaan in ay carruurtooda ilaaliyaan intii suurtagal ah ee ka iman kara rabshada iyo xadgudubka galmada. Laakiin goormuu qofku mawduucan kala hadli karaa caruurta dhan? Muxuu qofku si gaar ah ugu digayaa cunuggiisa? Miyaa lagama maarmaan in la shaaciyo dhammaan faahfaahinta ama ma jiraan dhowr sharciyo aasaasiga ah si looga ilaaliyo cunuga faraxumeynta galmada? Marka la eego xaqiiqda ah in dembiilayaashu ay badanaa yihiin xubno qoys, mowduuca xadgudubka galmada ayaa xitaa ka sii adag, waana in la xalliyo dareenka ugu sarreeya. Aad bay muhiim u tahay in la wargeliyo ilmaha in dhibaatada oo dhan iyo dhammaan cabsida markasta ay yimaadaan waalidka.
Xad-gudubka galmada - ka ilaalinta isku kalsoonida xoog leh
Caruurta isku kalsoon yahiin waxay u badanyihiin in ay noqdaan dhibanayaasha kufsiga. Nidaamka xejinta ee dembiiluhu wuxuu u muuqdaa inuu ka sarreeyo, maxaa yeelay wuxuu ka baqayaa in ilmuhu naftiisa difaaci karo ama wax ka qaban karo xadgudubyada guriga. Sidaa daraadeed waa muhiim in aad ilmahaaga siiso sawirka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah iyo inaad fiiro gaar ah u yeelato baahida jireed iyo inaad ixtiraamto. Tani waxay ka bilaabantaa dhunkashada adeerkiis, oo ilmuhu diido. Weligaa looma taabto ama la daalin, taas oo ka dhigaysa cunuga raaxo la'aan.
Jooji xadgudubka caruurta
A "Taasi maaha mid aad u xun, iskuday inaad isu tagto, haddii kale adeerka waa la caayey" waa sariir uu ku kaco seedaha cufka mustaqbalka. Sababtoo ah xitaa wuxuu u isticmaali karaa jaangooyooyinka noocaas ah si uu u guuro cunuga waxyaabo uusan rabin. Waxa uu ilmuhu rabo iyo waxa aanu samaynin, wuxuu go'aaminayaa naftiisa, waxa kale oo uu dhiira galiyaa inuu sheego in mid ka mid ah uusan rabin inuu taabto by eedda. Tani waxay u baahan tahay caruur isku kalsooni ah iyo dareenkooda ah inay awood u leeyihiin inay la macaamilaan jidhkooda.
Haddii ilmahaagu aad u xishoodo oo uu xajiyo, waxaad xoojin kartaa isku kalsoonaantaada koorsooyinka gaarka ah. Qiyaastii magaalo kasta waxay leedahay maanta, iyo is-difaacidda xanaanada caruurta waxaa bixiya ururada qaarkood. Tani ma aha in ay yidhaahdaan, in ilmuhu xanaanada caruurta isku difaacaan karin qof weyn oo wax ku ool ah si ay u difaacaan, laakiin aqoonta in ilmo keensataa koorsada noocan oo kale ah ka dhigaysa in ay kalsooni badan oo aad u dhiirranaada - iyo waxa sidaas ka soo bixiyaa doorka dhibbanaha.
Ilaali furfurnaanta iyo waxbarashada!
Xiriir wanaagsan oo la leh ilmahaaga waa alpha iyo omega oo ah in cunuggaagu kugula taliyo marka aad u baahan tahay. Dhab ahaan, waa in aad ilayskaaga u muujisid marka la eego jinsiyada, furfuran iyo xishood la'aan. Sheekada oo leh bees iyo ubax yar ayaa dheeraaday.
Ilmuhu wuxuu kaliya magacaabi karaa waxa uu og yahay. Sidaa ha noqotee sida ugu furfuran ee suurtagal ah, ku dhaji qeybaha jirka oo dhan magacyada saxda ah oo ha ka baqin inaad ka jawaabto su'aalaha ilmahaaga si daacad ah.
Haddii ilmahaagu ku weydiiyo - wayna weydiisan doonaan, maaddaama carruurta oo idil ay xiiseynayaan! - Meeshii ilmuhu ka soo baxaan, u sheeg isaga oo u siman sida ugu macquulsan oo ka baxsan xayawaanka dibadda. Waxaa jira hadda buugagta quruxda badan ee cajiibka ah iyo buug-gacmeedyo ka caawiya waalidiinta wax ka qabashada jinsi ahaan iyada oo aan la joojin.
Caruurta da'da dugsiyada hoose waa in ay ogaadaan nooca xadgudubka galmada. Ilmahaaga u sharax sida ugu macquulsan ee suurtogalka ah oo aan ka baqeyn in xad-gudubka galmada mar kale dhacdo. Dabcan waa wadada u dhexaysa digniinta iyo walwalka.
Sidaa daraadeed, waxaa muhiim ah inaad adigu u sheegto ilmahaaga: taasi way jirtaa, laakiin marar dhif ah ayay dhacdaa. Laakiin haddii ay dhacdo, waa inaad ka hadashaa arrintaas. Habka ugu caansan ee dembiileyaasha waa inay aamusaan ilmaha. Waxa uu sameyn doonaa hanjabaad ama isku dayi doonaa in uu carqaladeeyo cunuga. Ama wuxuu u yaboohay ballanqaad iyo abaalmarinta ilmuhu u aamuso. Sidoo kale, ilmahaagu waa inuu ogaadaa. Kuwa garanaya hababka waxay sidoo kale u sahlanaan doonaan in la aqoonsado marka xadgudubka galmadu bilaabmayo oo iskood isaga difaaci karo.
Sababtoo ah inta badan xadgudubka galmadu wuxuu bilaabmaa inuu kiciyo oo aan ka mid ahayn hal labaad ilaa kan kale. Qofka gardarada ah wuxuu dareemayaa jidkiisii ​​hore iyo waqti ka badan xudduudo dheeraad ah. Sidaa daraadeed ku dhiiri geli ilmahaaga inuu si dhakhso ah u hadlo wax kasta oo aan ku dhibsan, xitaa haddii loo hanjabay. Waa in la ogaado in ay kaliya ilaalin karto haddii ay ka hadlayso.
Marka lagu daro cabsida yaryar, internetku wuxuu sidoo kale bixiyaa dembiilayaasha dhiirigelinta galmada meel bannaan oo cusub. Qolkani waa in sida dhabta ah loo tixgeliyo waalidiinta.
Ka ilaalinta kadeedka galmada ee internetka
Muuqaalka Dembiga: Internetku naftiisu waa ku haboon tahay in aan la aqoonsan, sababtoo ah wuxuu leeyahay wax diyaar ah, waxa nolosha dhabta ah ee aan sameyn karin: qarsoodi buuxda iyo marqaati la'aan. Sidaa darteed, gaar ahaan goobtan cusub ee dembiyada cusub waa mid caan ah.
Nasiib darro, carruurta aan aqoon u lahayn qawaaniinta adduunkan cusub, waa kuwa ugu badan ee ku xanuunsan. Nasiib wanaag, waxaa jira xeerar asaasi ah oo u oggolaanaya xitaa kuwa ugu yar ee si nabadgelyo leh ugu guuri kara adduunka.
Aqoonsiga kuwa xadgudubka ka soo horjeeda furfurnaanka dhibbanayaasha
Dembiilayaashu waxay si fudud u heli karaan sawirrada, cinwaanada e-mailka, lambarrada telefoonnada iyo xitaa cinwaanada dhibbanayaashooda internetka. Sida carruurta iyo dhallinyarada inta badan si cad boostada, kuwaas oo goobaha loo yaqaan, waxaa sidaas daraaddeed ma keliya ciqaab iyaga u neecaw iyo aqoonta. maleegay intooda badan qaadan macluumaad this at qaar ka mid ah dhibcood xiriir la dhibanayaasha si ay naftooda u sameeyaan badanaa ka yar tahay ay yihiin iyo iska danaha caamka ah. Mararka qaarkood waxaa sidoo kale qolalka lagu sheekeysto ama goobo dadweyne, taas oo xiriirka ugu horeeya uu dhacayo. In forums kuwaas, dadka dhalinyarada ah soo ururin la danaha caamka ah (tusaale ahaan portals, halkaas oo dadka dhalinyarada ah samayn kartaa sheekooyin u gaar ah oo ay, ka dibna loo qiimeeyo), si xiriir ah oo ku saabsan hiwaayad caadiga ah waa ka badan inconspicuous. maleegay ayaa inta badan u isticmaali profile been abuur ah, taas oo ah, u dhigma macluumaadka iyaga u gaar ah (taariikhda dhalashada, meesha ay degan yihiin, waxbarasho) sidii hore u soo sheegnay, ma xaqiiqada.
Dhibaatadu waxay sidoo kale tahay in carruurta iyo dhallinyaradu ay dareemaan difaac afarta derbi ee iyaga u gaar ah. Dunida webka waa fure, sidaas darteed khatarta sidoo kale waxay u muuqataa in ay noqoto mid foolxumo ah oo aaney helin habka dhabta ah. Laakiin goorma ayuu bilaabaa xad-gudub jinsi? Marwalba lama kulmin kulan lala yeesho dembiilaha si looga hadlo xadgudubka galmada. U dir maleegay qaar ka mid ah images dhibanayaasha la ujeedooyinkooda galmada ama filimada la content galmada - kuwaas oo laftiisa waa fal danbi ah, sababtoo ah waxaa karo ilmaha, ka yar, waana tabar daranyahay, waa mugdi gali iyo cabsi. Sidoo kale waraaqaha been abuurka ah ama codsiga soo dirista sawirrada waa dembiyo dhiirigelin galmo ah.
Dhibaateynta galmada ee goobta shaqada ma aha dembi aan sahlanayn
Nidaamka ugu fiican ee loogu talagalay surfing safe - Talooyinka Carruurta
Muhiimadda ugu sareysa waa qarsoodi. Ha u dirin cinwaankaaga ama taleefankaaga internetka. Marna ha u dirin macluumaadkaaga shisheeye, iskudar xogta xisaabta ama sawirrada qoyska. Haddii aad isticmaasho naaneeys, waa inaysan ku jirin magaca dhabta ah ama daahaaga, sida Lisa99. Laga soo bilaabo arrintan, dembiiluhu wuxuu soo gabagabeyn karaa in Lisa uu ku dhashay sanadka xxxx. Isticmaal tirooyin guud iyo magacyo. Boggaga internetka ee Facebook aad ayaad u aragtaa haddii aadan sawir kaaga dhigin. Hubi in sawirku aanu ahayn casuumaad loogu talagalay dembiilayaasha dhiirigeliya ee dembiilayaasha ah.
Xaqiiqda ka jirta meel bannaan Shabaqa waa meel, meel bannaan oo aan xudduud lahayn iyo fursado aan xadidneyn. Waxkasta waa halkan: Meesha saaxiibka ah ee ka soo jeeda dembiilayaasha yaryar ee bangiga iyo macaamil carruurta. Badanaa dembiilayaasha ugu xun ayaa labisan dharka ugu dahsoon. Ka digtoonow in uusan dhab ahayn saaxibta ka dambeeya xiriir kasta oo fiican.
Haddii aad ka heshid waxyaabo xiiso leh, kala hadal waalidkaada. Ha isku dayin inaad sameyso wax aadan rabin. Sawirrada gaarka ah iyo lambarrada taleefanka iyo sidoo kale balamaha safarka kuma jiraan gacammo aan ajnabi ahayn.
Ogsoonow in dadka dhabta ah ay ka dhuumanayaan gabagabada sawirka. Qof kastaa maaha saaxiib - iyo haddii MickeyMouse17 runtii waa nin macaan leh codka ugu fiican ee uu sheeganayo inuu yahay su'aal.
Kulan laguma laheyn saaxiibo Internet ah. Marna ha kula kulmin saaxib waxaad ka ogtahay oo kaliya internetka. Halkan waxaa ku qulqulaya mid ka mid ah khatarta ugu weyn. Ha ka jawaabin martiqaadka noocaan ah! Taas bedelkeeda: Haddii aad dareemeyso inaad xiiso leedahay, waa inaad si dhakhso ah u soo sheegtaa xogta maamulaha golaha. Isla sidaas ayaa khuseeysa kiis marka qof uu kugula kulmo waxyaabaha ku saabsan dabeecada galmada, wuxuu noqon karaa fiidyow, sawir ama qoraallo ku haboon. Hawlwadeen ka ah goobta ayaa isla markaaba u gudbin kartaa boliiska.
Qof kasta oo aaminsan in xadgudubka galmada ee carruurta iyo dhallinyaradu waxay bilaabi doonaan oo kaliya marka ay timaado nooc ka mid ah ficil galmo oo qaldan. Laakiin meesha dhabta ah ee xadgudubka jinsiga ama kadeedka galmoodka dhab ahaantii bilaabaan? Dhab ahaantii ma xaddid kartid xaddidan si cad. Si kastaba ha noqotee, wax kasta oo jebiya sharafta iyo rabitaanka ilmaha waa caddayn fal dambiyeed.
Ka ilaalinta xadgudubka galmada carruurta
Taas macnaheedu waxa weeye, tani waxay xitaa noqon kartaa muuqaal cad ama ficil fara badan. Jaaliyadeena ayaa aad u dareen badan oo ku saabsan arintan, taas oo ah mid aad u wanaagsan dhinaca hal gacan, iyo qof kasta oo ka shaqeeya xarumaha waxbarashada waa dareenka. Laakiin waxay sidoo kale horseedaa xaqiiqda ah in inta badan aabayaasha ay sii kordhayaan caruurtooda, si aanay u samayn wax khalad ah.
Xad-gudubka galmada ee muuqaalkiisa
Bilowga waa dhibaataynta. Qolalka lagu sheekeysto ama shirarka carruurta ama dhalinyarada waxaa loo diraa fiidiyow ama sawirro leh waxyaabo qalafsan. Mararka qaarkood waxaa sidoo kale laga codsanayaa inay sameeyaan ficillada galmada, badanaa via Skype, markaa dembiiluhu wuu daawan karaa. Noocyada kale ee dhibaataynta waxaa ka mid ah rafcaanka waddada ama erayada jinsiga ah ee la soo bandhigo iyo waxyaabaha la soo sheegay.
Tallaabada xigta waxay taabataa ilmaha. Dembiiluhu wuxuu dalbanayaa in uu taabto ilmaha xaafada, wuxuu isku taabtaa ama wuxuu ku dhiirigeliyaa inuu isku taabto oo ha u arko. Taabashadu waxay u horseedi kartaa kufsi iyo / ama ku darid dhammaan ficilada galmada. Dabcan, pornography-ka caruurta ayaa sidoo kale qayb ka ah xadgudubka galmada ee carruurta iyo dhallinyarada. Halkan, ilmuhu wuxuu ku qasban yahay inuu dharka iska saaro oo uu sawir qaado. Mararka qaarkood waxaa sidoo kale lagu qasbay in ay daawadaan sawirada iyo filimada sawirada ama daawashada dadka kale. Noocyada xadgudubka jinsiga waa noocyo kala duwan oo ka mid ah hindisaha dabiiciga ah ee dembiileyaasha!
Maxay sidaas u tahay mid aad u dhif ah?
Qadarka xad-gudubka galmada waa mid aad u sareeya. Tani waxay ka dhalataa xaqiiqda ah in dembiilayaashu ay badanaa ka yimaadaan bey'adda ilmaha. Xaaladaha badankood, nasiib daro xubnaha qoyska ee ka faa'iidaysta awooddooda ilmaha. Ilmuhu wuxuu ku dhex jiraa xiriirka ku-tiirsanaanta, maskax ahaan iyo sidoo kale jir ahaan, mana ka hor-imaan karo weerarrada galmada wakhti dheer. Xitaa haddii ay go'aansato in ay la hadlaan qof weyn oo qoyskooda ah, inta badan ma keeneyso booliska. Xaqiiqdu waxay tahay, ilmo u dhow midkuu yahay dhibbanaha, waxay u badantahay inay tahay in dembiga la wargaliyo oo maxkamad la geeyo. Xaqiiqdu waxay tahay in weli inta badan gabdhaha yihiin dhibbanayaasha fal-dambiyeedka. Dembiilayaasha ragga ah waxay badanaa ka yimaadaan jawiga ku dhow ama goobada dhow ee aqoonta.
Maaddaama dhibanayaasha inta badan ay aamusnaadaan waqti dheer, way adagtahay in la ogaado xadgudubka galmada. Waxaa badanaa la aqoonsadaa goortaas waa goor dambe oo calaamadaha jireed ama jir ahaaneed ayaa dhacay. Waxaa jira tiro calaamado ah oo muujin kara xadgudub jinsi ah, hase yeeshee qasab ma aha inay tilmaamaan.
Waa maxay calaamadaha caadiga ah ee xadgudubka galmada?
Gaar ahaan mawduucan, dad badan ayaa ka baqaya inay xitaa muujiyaan shaki, sababtoo ah, si khalad ah loo eedeeyo badanaa waxay ku nool yihiin nolol ay kufilanayaan eedeymaha iyo marar badanna aan dib loo dhigin. Si kastaba ha noqotee, waxay kaliya ku jiri kartaa xiisaha dhibbanaha si ay u muujiso shaki in ka badan in la iska indho tiri karo xadgudubka oo dhibbanaha uu haysto sanado badan.
Isbedelada dhaqanka waa shaki!
Isbedelada dabeecadda ayaa badanaa ah calaamadaha ugu horeeya ee xadgudubka galmada. Taa macnaheedu ma aha in wax kasta oo aan caadi ahayn ee dabeecadda ah ay ku saleysan tahay xadgudub galmo. Sidoo kale, xanaaqa asxaabta leh, gelitaanka dugsiga ama luminta qofka dhow ayaa sababi karta isbedelkan habdhaqanka. Sidoo kale, hababka barashada qaarkood iyo marxaladaha korniinka ayaa inta badan sabab u ah cilladda ku-meel-gaadhka ah ee dabeecadda.
Kormeerka joogtada ah wuxuu bixiyaa macluumaad, laakiin waa in aan iloobin in ilmo kastaa uu ku xadgudbo xadgudub si ka duwan sida dabeecadda, da'da, dembiilaha iyo dastuurka. Muhiim: Cilladaha aan caadiga ahayni waxay muujinayaan, shaki badan ayaa ka sii daraya!
Gaabis ah qaababka dabeecadaha carruurnimada hore
Qaar ka mid ah calaamadaha ayaa si gaar ah looga shakisan yahay waana inay u digaan waalidiinta. Waxaa ka mid ah gaar ahaan carruurta: hurdo xumo iyo dhacdo sii kordhaya ee qarow, kaadiyo ama saxarada ka dib sii dheerayn Saubersein, cabsi ama cabsi-cuqdadeedka cusub guud ahaan, dhaqanka whiny, dhaca dhaqanka caruureed in ilmuhu uu si dhab ah loo kaydiyaa (tusaale ahaan, suul nuugid, hadal ilmahaaga) baahida loo qabo oo kordhay amaanka, rabitaanka cuntada oo luma ama jamasho, la'aanta xidhiidhka, wax cabsi ah ka xiriirka bulshada, Dumayn adduunka ka mid ah oo u gaar ah, danta kala in meydadka caruurta iyo dadka waaweyn, oo ku yaalla foom u gaar ah galay sidoo kale muujiyay, in ciyaarta (falalka galmada waxaa inta badan laga beddelo ciyaarta ama mawduuc ciyaarta), luminta xiisaha waxyaabo qurux badan.
Carruurta waayeelka ah, waxaa jira inta badan isbeddello kale oo ka duwan isticmaalka daroogada, dembiga, niyadjabka, fikradaha isdilka, cunto xumida, iyo xitaa hoos u dhaca waxqabadka dugsiga. Badanaa dhalinyaradu waxay sidoo kale muujiyaan dabeecad galmo oo aad u weyn.
Astaamaha jirka ee xadgudubka galmada
Marka lagu daro isbeddelada dabeecadaha kor ku xusan waxay badanaa yihiin calaamadaha jirka, oo keligood laakiin badanaa ma bixinayaan caddayn ku filan oo ah xadgudub galmo. Inta badan waxay noqdaan kuwo shaki ku jira oo kaliya oo ku xiran habdhaqanka maskaxda. Calool xanuun, calool xanuun, nabar, dhiig kaadida (waayo, cudurada kaadi) ama saxaro (by furma futada) waxaa laga yaabaa in silica iyo ka badan ama ka yar dhib lahayn ee dabiiciga ah, laakiin inta badan waxaa ugu sugan calaamooyin xadgudubka galmada. Astaamo badan ayaa ah xanuun ku dhaca aagga xubnaha taranka, cuncunka cuncunka, dhaawacyada caloosha, cudurada galmada ee uurka aan la rabin.
Xad-gudubka galmadu waa marka la ogaado marka ilmuhu uu ku kalsoonaado qof weyn, ama marka horay loo muujiyey calaamado muuqda oo waalidkuna uu shaki ka galo oo uu bilaabo inuu baaro.
Dhibaatada badanaa waxay la socotaa shoog! Maxaa hadda? Sideen u sii socdaa si aan u badbaadiyo ilmahayga oo ciqaabtana ciqaabta? Haddii ilmuhu ka baqo mawduuca, badanaa wuu ku qaylin karaa ama wuxuu ku sameeyaa jajab. Waxaa jira tiro calaamado ah oo muujinaya faraxumeyn galmo waxaana lagu faahfaahiyey meelo kale.
Aad bay muhiim u tahay in ilmuhu si dhab ah u qaato marka uu ka hadlayo xadgudub. Xaalado yar oo ka mid ah carruurtu waxay ka fekeraan wax sidan oo kale ah. Sidaa daraadeed, waxay si cad u qaateen sheeko kasta, hase yeeshee, gacmeed iyo sireed ayaa laga yaabaa.
Calaamadaha ku-xadgudubka galmada ee ilmo
Si wax looga qabto, caruurtu badanaa kama hadlaan sababtoo ah dembiiluhu wuxuu ka yimaadaa degaanka ku dhow, sida caadiga ah xitaa xitaa qoyskiisa! Taasi badanaaba waxay noqon kartaa xannibaadda ugu weyn ee carruurta!
Isku deji oo xooji cunugga!
Is-deji, xataa marka ay adag tahay. Ilmuhu wuxuu ku jiraa xaalad ay dareemeyso miyir beel, wareersan oo marar badan dembi. Taas macnaheedu maaha inay tahay dembiileyaasha naftooda ee ku eedeeya ilmaha.
Aad bay muhiim u tahay inaad hesho caawinaad xirfad leh sida ugu dhakhsaha badan. Waxay ku raaxayn karaan, xoojinayaan, badbaadin karaan, cunugana u qabsan karaan, laakiin kaliya cilminafsiyaadka cilminafsiyeedka iyo xirfadlayaasha ayaa loo tababaray inay daweeyaan maskaxda maskaxda ah in xadgudub kasta uu ka tago. Waxay sidoo kale ka caawiyaan waalidiinta inay si fiican ula qabsadaan xadgudubka galmada ee cunugooda waxayna tilmaami karaan xaalado adag iyo sida loola macaamilo.
Waalid ahaan, waxaad ku caawin kartaa cunuga sida caadiga ah ee sida ugu macquulsan. Xitaa haddii ay u muuqato mid aan caqli gal ahayn, aan caqli-gal ahayn, caado-qaadashadu waxay sidoo kale bixisaa nabadgelyo waxayna ka caawisaa ilmaha inuu ka shaqeeyo khibradaha argagaxa leh.
Mararka qaarkood waxay ka bilaabataa shakin shaki leh oo dhowaan adag. Haddii ilmuhu uusan ka hadlin xadgudubka galmada, waa in aadan ku duugin su'aalaha tooska ah, sababtoo ah haddii kale waxaa dhici karta in ilmuhu si buuxda u xiro.
Ilmaha u sheeg maalinkiisa, si ka badan sidii caadiga ahayd, oo dhegaysta si taxadar leh haddii ay si ula kac ah u hadlaan dhacdooyinka aan fiicnayn. Qaar ka mid ah marna - run ahaantii marnaba - ilmaha cay u dhiga ah: "Waa in Laakiin si aad ku lahaa ka badan sidii hore isagoo leh" Or ka xun: "maxaad aad naftaada ha maxaa yeelay, ma ay dhalan" iyo "waxaan jeclaan lahaa in aad meel ... "
Hadalka noocan oo kale ah ayaa dhiirigelin kara dambiga cunugga waxaana dareemaya inuu sii xumaado ka dib. Waxay ku kacaysaa ilmo dareen badan oo xitaa wax ka qabta xadgudubka. Haddii aad ka soo kabsatay shooggii koowaad, waa inaad, sida kor ku xusan, weydiiso shaqaalaha takhasuska leh ee caawimaadda. Kiisaska intooda badan, tan waxaa ka mid ah booliska, sababtoo ah xadgudubka caruurtu waa dembi culus oo loo baahan yahay in la ciqaabo si loo ilaaliyo dhammaan carruurta kale ee ka yimaada dembiilahan. Sidee iyo goorta booliisku ku lug leeyahay waa in loo qabtaa faa'iidada ilmaha marka lala tashanayo cilmu-nafsiga.
Imtixaanno wadajir ah oo lala yeesho carruurta | Waxbarashada ...
Jacaylkii ugu horreeyay ee weynaa waxbarashada
Waa maxay sababta aan rabo inaan carruur u yeesho? waxbarashada
Ku dalbashada dharka caruurta | waxbarashada